Hyacinth | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fomba hambolena hyacinth amin'ny dacha
Ny Hyacinth dia mety ho trano fambolena, ary zaridaina. Manomboka mihetsiketsika ny hyacinths amin'ny fiandohan'ny lohataona. Ny voninkazo dia mamirapiratra sy mamony. Raha miresaka momba ny hôsianina maoderina isika, dia mety hitifitra ny fisainana amin'ny karazany samihafa izy ireo - manomboka amin'ny fotsy ka hatramin'ny maroon-mainty, mavokely ary volomparasy. Ny Hyacinth dia voninkazo samihafa izay mety ho azo atao amin'ny fanerena ara-potoana sy amin'ny fanonganana.
Ahoana no hambolena sy hikarakarana ny tongolobe viper
Muscari (Eubotrys, Botryanthus) dia zavamaniry tsy hita isa, izay fantatra amin'ny anarana hoe "viper onion" ary ny "hyacinth mouse". Eo ambany fitomboana ara-boajanahary, dia mitombo any an-tendrombohitra sy any amin'ny sisin'ny ala any Krimea sy any Kaokazy, any amin'ny faritra Mediteraneana, any atsimo sy afovoan'i Eoropa ary Azia Minora. Lasa malaza be ny zavamaniry noho ireo fotoana miposaka mozika fahiny, raha oharina amin'ny voninkazo hafa.
Ny loharano lohataona tsara indrindra amin'ny fanomezana sy ny endriky ny fambolena azy ireo
Rehefa avy ny orana sy ny oram-batravatra mangatsiaka, tsy hisy hampitraka ny fanahinao toy ny lohataona voalohany lohataona izay mamakivaky ny oram-panala ary manoloana ny fisian'ny lohataona. Ny voninkazo aloha dia marefo amin'ny mangatsiaka, tsy mendrika ary mihamitombo haingana. Misaotra ireo toetra rehetra ireo, dia tena tsara tokoa izy ireo amin'ny fananganana trano fialan-tsasatra, zaridaina, kianja, sns.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Hyacinth